Dab-bakhtiiye - Wikipedia
Dab-bakhtiiye waa aalad firfircoon oo dab damis ah oo loo isticmaalo in la demiyo ama la xakameeyo dabka yaryar, inta badan xaaladaha degdegta ah. Loogama jeedo in loo isticmaalo dabka ka baxsan, sida kan saameeya saqafka, khatar gelinaya isticmaalaha (ie, jidka aan baxsan, sigaarka, halista qarxa, iwm), ama haddii kale waxay u baahan tahay khibradda dab-demiska. Caadi ahaan, dab-bakhtiiye wuxuu ka kooban yahay weel gacan-qabsi leh oo lagu rakibo weel dabacsan oo dabka ka baxa. Dab-bakhtiiyeyaasha oo la soo saaray maraakiibta cadaadiska aan cylindrical ahayn ayaa sidoo kale jira, laakiin way yar yihiin.
Dab-bakhtiiye-cadaadis lagu keydiyay oo uu sameeyay Oval Brand Products Products Waddanka Maraykanka, dab-bakhtiiyeyaasha dhammaan dhismayaasha aan ahayn guryaha waxaa guud ahaan looga baahan yahay in la adeego oo kormeero shirkadda adeegga dab-demiska ugu yaraan sanadkiiba. Awoodaha qaarkood waxay u baahan yihiin adeegyo isdaba joog ah oo loogu talagalay dabdemiyeyaasha. Bixiyuhu wuxuu dhigayaa baqshadda dab-bakhtiiyaha si uu u muujiyo nooca adeegga ee la qabtay (kormeerka sanadlaha ah, dib u soo celinta, dab-bakhtiiye cusub).
Dab-bakhtiiye British ah oo leh calaamad aqoonsi, dhibic call iyo calaamad fal-dambeedka. Waxaa jira laba nooc oo dab-demineed oo waaweyn: cadaadis la keydiyay iyo kartid-ku-shaqeyn. Qaybaha cadaadiska ee la keydiyay, qulqulatada ayaa lagu kaydiyaa qol isku mid ah sida wakiilka dab-demiska laftiisa. Iyada oo ku xiran wakiilka la adeegsanayo, isbarbar dhiga kala duwan ayaa loo isticmaalaa. Qalabka kiimikaad ee qallalan, nitrogen waxaa caadi ahaan loo isticmaalaa; Biyaha iyo dab-bakhtiiyeyaasha dabiiciga ah waxay caadi ahaan isticmaalaan hawada. Dab-bakhtiiyeyaasha dab-bakhtiiyeyaasha ah ayaa ah nooca ugu caansan. Dab-bakhtiiyeyaasha mashiin-gareeya waxay ku jiraan gaasta qaloocsan ee ku jirta baakad gaar ah oo la calaamadeeyay ka hor inta aan laga saarin, oo u soo bandhigaysa qoryaha si loogu diro wakiilka dab-demiska. Noocani ma aha mid caadi ah, waxaa loo isticmaalaa sida meelaha sida goobaha warshadaha, halkaas oo ay helaan isticmaalka ka sarreeya celcelis ahaan. Waxay leeyihiin faa'iido sahlan oo degdeg ah, oo u oggolaanaya shaqaale si uu u demiyo dab-demiska, dib u dhejiyo, kuna soo noqo dabka waqti macquul ah. Si ka duwan noocyada cadaadiska lagu keydiyay, dab-bakhtiiyayaashu waxay isticmaalaan dioxide karbondo dioxide halkii nitrogen, inkasta oo kartoonada nitrogen loo isticmaalo heerkulka hoose (-16 rated). Dab-bakhtiiyeyaasha badeecada ee mashiinka ku shaqeeya waxaa laga heli karaa noocyada budada kiimikada qallalan iyo kuwa qallalan ee gudaha Maraykanka iyo biyaha, wakiilka qashinka, xumbada, kiimikada qallalan (fasalka ABC iyo B.C.), iyo walxaha budada ah (fasalka D) ee adduunka intiisa kale.
Class C Template:N/a Template:N/a Class E Electrical equipment
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Dab-bakhtiiye&oldid=221579"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 26 Oktoobar 2021, marka ee eheed 13:24.